Indlela ukubhala impendulo isimangalo?
ukuba uhlanganyele nabanye abantu, sihlale kuleli zwe lanamuhla. Lokhu kwenzeka uma uthenga umkhiqizo, oda noma yimaphi amasevisi, ekufezeni izibopho zayo siqu. Ukukhulumisana phakathi kwabantu kodwa futhi izinhlangano ezingokomthetho hhayi kuphela. Ngeshwa, izinto zingenzeki njalo uhambe ngokushelela, ngakho party Angenelisekile ukuvikela amalungelo ayo, unelungelo ukubhala isikhalazo. Phezu kokuthola lolo phawu ukunganeliseki kusuka ikhasimende noma ibhizinisi umlingani, inkampani ubophekile ukuba ubhale impendulo.
Ngokuvamile impendulo simangalo senziwe ngokubhala, ngefomu khulula, nesitayela salo Kufanele kube okufanayo isikhalazo ngokwalo. Kumele sibhekiswe ngokuqondile isicelo. Uma ucacise e isimangalo ikheli lokuposa impendulo uthunyelwa nge-ke. Idokhumenti esayinwe umamukeli. Okuqukethwe umbhalo kufanele ukwenze kucace ukuma onecala futhi kusukela umugqa wokuqala, kubonisa evuma ukwenza isikhalazo noma cha.
Uma impendulo isimangalo kuhlanganisa nezimfuneko wesicelo, umamukeli kumele ihlangabezane izimangalo. Impendulo kumele anikezwe, uyokwaneliswa ngokugcwele izidingo noma ingxenye. Kufanele sisho ulwazi izinsuku oda ukwaneliseka yabo. Ofaka isicelo ungacela ukubambezeleka futhi uma bonke izinkomba ngalesi sikhathi akunakwenzeka.
Futhi ucabange ukukhetha uma umemukeli alivumelani nezidingo umfakisicelo. Khona-ke impendulo isimangalo kufanele ukhombise isikhundla salo zomthetho. Omunye kungaba zilandise njengobufakazi obuqinisekile bokuthi amadokhumenti, ezifana sicashunwa lesitsetfwe yasebhange mayelana nokukhokhwa izikweletu. Kwezinye izimo ungase futhi akazange aphendule. Lokhu ukuthula uzobe esichazwa ngokuthi ukuphikisana nokwenqaba ukwenza izibopho ezithile. Kodwa uma inkontileka sibhaliswe iphuzu wokuthi ukungabi bikho kokuhlolwa counterparty impendulo uthathwa kwemvume, kuthule kungasho ukuthi umamukeli avumelane izenzo ezichazwe izimangalo.
I nzima kakhulu ukuba alandise yezitolo. Phela, cishe ziyothambekela kakhudlwana kwanoma ubani omunye, kufanele abhale impendulo isikhalazo kwamakhasimende. Lesi sakamuva singabangela baveze babengathandi ku "Encwadi izikhalazo", thumela i e-mail inkampani, bhala isikhalazo kwiwebhusayithi ekhethekile. Kungakhathaliseki ukuthi laliyini, kodwa ukuphendula umthengi kuzomele ubuyekeze kunoma isiphi isimo. Isikhathi eziphendula simangalo izinsuku ngokuvamile bengekho ngaphezu kwama-10 kusukela esikhathini irisidi.
Le ncwadi impendulo kufanele kahle kakhulu kucatshangwa out, ukuthi ngiwududuzile futhi wanelisa ikhasimende Angenelisekile, kunokuba kwamthukuthelisa nakakhulu. Akufanele neze izaba, futhi nakakhulu ukuze ucacise ukuthi umthengi yobudedengu yayo noma namandla ka icala ngalokho okwenzekile. Kumele sikhumbule ukuthi ubani okhokha inkampani imali, ngakho wayeqinisile kuzo zonke izinto. Ngisho ukubuyekeza elilodwa kwesokunxele ikhasimende othukuthele uxwayiswe angaphezu kweshumi nambili abathengi ezingaba khona.
Impendulo simangalo ukuze kwenziwe ngendlela emnene futhi elungile. Uma isikhalazo isebenza ke ngokushesha kufanele axolise okhalazayo, ngimbonge ulwazi, zama ukuxazulula izidingo zawo. Kubalulekile ukwazisa umthengi mayelana izinyathelo ezithathwe ukukusiza ukugwema zikhathi okwengeziwe edabukisayo.
Kanjani ukuba ukhokhele yokupaka maphakathi eMoscow: zonke izindlela
Imisebenzi nezinjongo of icala lomthetho
"Ukuvukela ubumfihlo" umthetho eRussia
Indlela ezimeleyo cottage: isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo, imibhalo kanye nezincomo
Sciatica - kuyini? Sciatica: Izimbangela, izimpawu kanye nokwelashwa lwemithi
Iyini inqubo tetemibhalo
Isigaxa wesibeletho biopsy.